Izinzuzo ezinhlanu ze-aluminium honeycomb composite materials-Industry News-Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd.
Izinzuzo ezinhlanu zezinto zokwakha zezinyosi ze-aluminium
Isikhathi: 2021-03-16 Ukushaya: 14
I-Aluminium honeycomb composite (eyaziwa nangokuthi i-aluminium honeycomb core kanye ne-aluminium honeycomb plate) uhlobo lwento ehlanganisiwe ekukhiqizweni eyayisebenzisa ucwecwe lwe-aluminium enezingqimba eziningi kanye nokunamathisela okuphezulu kwamandla ukwakha ukwakheka kwezinyosi okunezinhlangothi eziyisithupha ngemuva kokucindezelwa kwe-foil ukugqagqana nokwelula. Isetshenziswa kakhulu ekwakhiweni komphakathi, ngaphakathi nasemikhunjini yezimoto nanjengezinto zasemkhathini.
Emakethe evame ukusetshenziswa i-aluminium ucwecwe lwezinyosi ezibonakalayo kusuka ku-alloy 3003 / H24, ubukhulu 0.03-0.06mm, amandla aqine angaphezulu kuka-280Mpa, futhi ukunwebeka kungu-3%. Izinzuzo zayo eziyinhloko zimi kanje:
(1) Isisindo esincane. Ipuleti elijwayelekile linesisindo esingu-16 kg / m2 kuphela, elilingana nengilazi engu-6mm futhi ingu-1/5 kuphela wesisindo setshe elifanayo.
(2) Ukumelana nomthelela. Amandla wempembelelo mkhulu ngokuphindwe kayishumi kunamandla ka-10mm granite awugqinsi, ucezu lwento eqinile aluphulwanga ngemuva komthelela, kuphela ingxenye yomthelela oqondile olimele. Ngemuva kwemijikelezo eyi-3 yokuhlolwa kweqhwa (-120 ~ +25 ℃), amandla ayo awanciphi nakancane, ngakho-ke kuyinto enhle yokuhlobisa yezakhiwo eziphakeme.
(3) Phezulu noma yiluphi uhlobo lwetshe lungasetshenziselwa ukuhlobisa. Itshe lingelashwa nganoma iyiphi indlela ukuqinisekisa ukwehluka kombala, imifantu, njll. Kuncishiswa kube ubuncane.
(4) ukufakwa Easy. Imikhiqizo kulula ukuyifaka, kungenzeka futhi ukusebenzisa oku-pre-install ngaphandle kwamathuluzi athile noma okokusebenza ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Amamojula ngamanye afanele ukufakwa kodonga oluhlanganisiwe lwamakhethini eyunithi. Njengoba isisindo sezinto sinciphile kakhulu, ukunamathela okuvamile kungalungisa kalula amaphaneli odongeni, ukufakwa kulula, izinto ezisizayo zincane, isikhathi nomsebenzi kuyasindiswa, futhi nezindleko zokufaka ziyancipha.
(5) Ukuzwakala okuhle nokushisa. Ngemuva kokuhlolwa, ukuvinjelwa komsindo nokufakwa kokushisa, umphumela wepuleti lezinyosi ungcono kunomthelela wepuleti lamatshe wemvelo ngobukhulu be-30mm. Ukucaciswa kwetshe le-aluminium lezinyosi ipuleti elihlanganisiwe kungenziwa ngezifiso. Ukucaciswa kwepuleti ejwayelekile yi-1200mm x 2400mm ngobukhulu obujwayelekile 20mm. Ubukhulu betshe lingu-4mm, ubukhulu be-aluminium honeycomb bungu-14mm, ubukhulu bensimbi ephezulu yesendlalelo esiphakathi nokunamathisela kungu-2mm.
Ipuleti lamatshe wemvelo lingenziwa ngemabula noma ngegranite. Olunye uhlangothi lwepuleti lezinyosi le-aluminium limbozwe ngefilimu ephezulu yamandla ingilazi, olunye uhlangothi luboshwe nge-epoxy resin adhesive, ingcina ye-epoxy resin ifakwe ngokulinganayo nefilimu yengilazi, bese kufakwa ungqimba lwetshe. Inqubo iyaphindwa ngepuleti lamatshe ukwakha isakhiwo sephaneli lesangweji.
Izinto zokwenziwa zezinyosi ze-Aluminium zinazo zonke izinzuzo ezibalulwe ngenhla, ukufunwa kwayo kuyanda futhi kuyahlukahluka. Isetshenziswa kabanzi ekwakheni umhlobiso wamakhetheni udonga, ifenisha, imoto nokwakhiwa kwemikhumbi, izitimela ezinejubane elikhulu, ezokundiza, umkhakha wamandla neminye imikhakha. Izidingo zayo zemakethe zizokhula kancane kancane ngokuzayo. Ngokuza okusheshayo kokuthuthuka kwezimboni zezokuthutha nezokwakha, ithemba lesicelo lamapaneli we-honeycomb composite composite lithembisa kakhulu.
Okulandelayo: Isisindo esinzima! I-CRRC enkulu kuphela! Owesibili ngobukhulu emhlabeni! I-Alstom iqeda ukutholwa kwebhizinisi lesitimela laseCanada Bombardier